Vaovao - Ny fironana amin'ny fampandrosoana ho avy amin'ny fitaovana fanorenana sy ny indostrian'ny fanaka trano
Ny fironana amin'ny fampandrosoana ho avy amin'ny fitaovana fanorenana sy ny indostrian'ny fanaka trano
Raha oharina tamin'ny taona teo aloha, ny tsenan'ny fitaovam-panorenana trano tamin'ny taona 2021 dia nandalo fiovana manozongozona ny tany. Nahita fisalasalana be loatra ireo mpandraharaha ara-barotra, ary toa mihamafy izany fiovana izany.
1. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia ho lasa tokonam-baravarana henjana: Na avy amin'ny sehatra nasionaly izany na avy amin'ny mpanjifa dia mihamitombo hatrany ny fiheverana ny olana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fenitry ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny vokatra ihany no ahafahan'ny orinasa mampitony ny mpanjifa amin'ny fividianana sy fampiasana azy ireo.
2. Miara-miaina ny "marika" sy ny "de-marika": Amin'ny ho avy, ny marika fampitaovana trano mahazatra dia ho lasa mitovy tsikelikely amin'ny tsirony manokana sy ny laharany, manana toetra mampiavaka azy, ary hitarika amin'ny fankafizana ny dividends avy amin'ny vava. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra lafo vidy kokoa dia tian'ny saranga antonony vao misondrotra. Ny Super IP dia mandrisika ny mpankafy hanjifa be dia be, ary nipoitra ny vokatra an-trano malaza amin'ny Internet "tsy misy marika".
3. Fanavaozana ny vondrona mpanjifa: "Tanora ao an-tanàna kely", "taonan'ny taona 90" ary "olon-tokana" no tena mety ho lasa hery telo lehibe amin'ny vondrona mpanjifa ho avy.
4. Ny orinasa miompana amin'ny serivisy sy ny famolavolana dia hiditra mafy amin'ny tsena: Raha ampitahaina amin'ny tsena taloha izay nifantoka tamin'ny vidin'ny vokatra, ny fantsona ary ny fampiroboroboana, ny mpanjifa amin'ny ho avy dia handinika bebe kokoa ny famolavolana ny vokatra, ny serivisy ary ny traikefa, ary bebe kokoa ny tena- afovoany.
5. Lasa fivoahana vaovao ny akanjo iray manontolo: Miaraka amin'ny fiovan'ny tian'ny mpanjifa, ny lamina haingon-trano dia somary hafa noho ny teo aloha, ary ny fiovan'ny roa dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahazarana mividy ny mpanjifa. Amin'ny maha-fivarotana malaza azy, ny akanjo manontolo dia efa naneho ny tombony azony amin'ny fifaninanana.
6. Fananganana fantsona Omni: Mihena tsikelikely ny asan'ny fantsom-barotra nentim-paharazana, ary ny fananganana fantsona omni dia ho lasa mahazatra. Nandritra izany fotoana izany, nitondra fahafahana vaovao ny fiposahan'ny fandefasana mivantana sy horonan-tsary fohy. Raha afaka manao asa tsara amin'ny fanatsarana sy ny fampidirana ireo loharano an-tserasera sy ivelan'ny aterineto isika, dia tsy maintsy hitondra fifamoivoizana amin'ny fivarotana vokatra izany.
7. Ny foto-kevitra hoe akaiky ny fiainana tsara kokoa: Ankehitriny ny mpanjifa dia mikatsaka ny famolavolana trano izay mety ho akaiky kokoa ny fiainana tsara kokoa. Ny mpanamboatra vokatra dia tokony haka an'io fironana io mba hahafahan'ny olona miaina fahatsapana mafana sy mahazo aina mandritra ny fampiasana.
8. Hivoatra bebe kokoa ny maodely fandraharahana miompana amin'ny serivisy
"Service" no ampahany manan-danja indrindra amin'ny indostrian'ny fitaovana fanorenana trano. Na dia tian'ny orinasa maro aza izy io, dia mbola tsy mahasarika ny sain'ny maro satria tsy miteraka sanda fototra. Na izany aza, mihamaro hatrany ny tranga mampiseho fa eo ambanin'ny fangatahana tsena amin'ny ho avy, izay orinasa mitana ny haavon'ny serivisy, izay orinasa tsy ho resy amin'ny fifaninanana tsena ho avy.
Fotoana fandefasana: Oct-18-2021